Yuhuuda | KONGOLISOLO
Asalka iyo aasaaska baabtiiska: inbadan baa la baabtiisaa iyada oo aan la aqoon asalka dhabta ah iyo aasaaska baabtiiska "Yuhuuda iyo Masiixiyaddu waxay kaliyeysteen wixii ay afrikaanka qadiimka ahaa ee horaan u dhaqmayeen"
Posted By: KongoLisolowaa: July 7, 2020 05: 55 No Comments
Isku mid ayaa la mid ah dhamaan ciidaha la xiriira isticmaalka biyaha. Asalka dhaqankii nadiifinta nafta jidhka wuxuu ka yimaadaa Kemet (Masar), waxaa jira 3000 a ...	Akhri wax dheeraad ah
In ka badan dadka kale, waa dadka Madowga / Afrikaanka ah ee sida ugu badan u adkaystay, laakiin kuwa weli ka walwalsan kuwa kale; dhaqanka diimeed ee dadka Kemite wuxuu sii wadayaa in loo sii gudbiyo jiilba jiilka
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 10, 2020 08: 18 No Comments
Sidee ayay tahay in dad sida dadka oo kale ah, oo ay ugeysteen xoogsheegasho iyo cadaalad darada qarniyo badan, welina ay taagan yihiin heer ay waligood ka walwalaan kuwa doonaya in ay ridaan Af ...	Akhri wax dheeraad ah
Wadanka Israel ee hada jira waa abuuris Masonic ah, oo aan wax shaqo ah ku laheyn reer binu Israa'iil ee Kitaabka Quduuska ah. Aan u oggolaado kuwa iga soo horjeedaa inay tilmaamaan calanka dalkan Cibraaniga ah ee caanka ah ...	Akhri wax dheeraad ah
11 Haddaad ku aragtid naag qurux badan oo maxaabiista dhexdooda ah, oo aad iyada ku jeclaatid oo aad guursatid naag. 12 Haddaba gurigaaga waad soo gelisaa, iyadu way xiiraysaa ...	Akhri wax dheeraad ah